Fil d'actualités du 24/02/2018
24/02/2018 - 13:30 : ANTSIRABE: Tonga nanao hetsika fitakiana mba hanokafana ny Orinasa AA-Tiko ny tantsaha sy vahoaka marobe androany, ka nisy hatramin'ny fanariana ronono betsaka. Tifitra baomba mandatsa-dranomaso no setriny.
24/02/2018 - 12:30 : JONO MAKAMBA: Hisokatra ny 2 martsa izao ny taom-panjonoana makamba. Ho an'ny trondro tilapia kosa dia efa nanomboka andro vitsy ho an'ny mihoatra ny 7sm ary voarara kosa ny latsak'izay.
24/02/2018 - 11:30 : KOLONTSAINA SY TANTARA: Mifarana anio 24 febroary ny fampahafantarana ny tantaran’ ny mpanjaka Ranavalona III eny amin’ny IKM Antsahavola.
24/02/2018 - 10:30 : GAZETY VALISOA VAOVAO: Mankalaza ny faha-9 taona nisiany ity gazety ity anio.
24/02/2018 - 09:30 : AFT ANDAVAMAMBA: Hisy ny seho lehibe hiarahana amin'ny mpanakanto Jaojaoby anio 24 febroary izao manomboka amin'ny 6ora hariva hoenti-mamarana ny fankalazana ny faha-70 taonan'ny AFT.
23/02/2018 - 16:30 : AMBANIN’AMPAMARINANA :Ho an’ireo olona tsy maintsy nafindra toerana haingana dia efa misy tany natokana hamindrana azy ireo eny Ambohidratrimo izay omena maimaimpoana ary hosoratana amin’izy ireo.
23/02/2018 - 16:00 : ANDRON’NY SEKOLY : Mifarana androany ny fankalazana izany ka nisy tamin’ireo sekoly tsy miankina no namarana izany tamin’ny fanaovana diabe sy ny fanatanjahan-tena.
23/02/2018 - 15:30 : AMBATONDRAZAKA : Hiasa manomboka ny volana martsa izao ilay orinasa mpamokatra zezika izay napetraka tany noho ity faritra ity sompotr’i Madagasikara amin’ny vary.
23/02/2018 - 15:00 : FANAMBOARAN-DALANA : Ny minisitry ny asa vaventy no hisahana ny fanamboarana ny lalana eto Antananarivo sy ny manodidina ka hisy ny fandaminana amin’ny fifamoivozana eto.
23/02/2018 - 14:45 : SAMBAVA : Nidina hifotony tany ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana hijery akaiky ny zava-misy momban ’ny fiakarany vidim-piainana mihompapana izay mampitaraina ny mponina any.
Archive du 20170128
Vahoaka Malagasy Manaiky ambakaina
Na ny vahiny mandalo aza gaga fa hendry sy mahari-pery loatra ny Malagasy ka 2 000 Ar ny kilaon�ny vary,
Taratasin�i Jean Tia kely
Miarahaba Jean a ! Aiza moa isika no tsy ho kely toy izao foana ! Efa ilay toe-tsaina mihitsy no lomorina e !
Solona hofan-tranon�ny mpiasam-panjakana Tokony hampitomboina avo 10 eny
Ny minisitry ny asam-panjakana, Maharante Jean de Dieu, mihitsy omaly no nilaza fa nitaky ny hampitomboana avo 10 heny, farafahakeliny,
Fiaraha-miasan�ny Bianco sy INFA Nahomby ny santatra
Sambany izahay no niara-niasa tamin�ny birao mahaleotena misahana ny kolikoly na Bianco tamin�iny taona 2016 iny,
Fanodinkodinana ny vatsin'ankohonana Ho avy ny fanadihadiana
Manoloana ny fitarainan�ireo mponina ao amin�ny fokontany Antanimora central ao amin�ny distrikan�Ambovombe Androy izay nivoahan�ny filazana fa misy manodinkodina ny vatsin�ankohonana
Jirama Sambava Misy mandrahona handoro
Fitia te handoro sa tena vokatry ny delestazy ? Naharay antso an-telefaonina ny Lehiben�ny Faritra SAVA Velomaro Faustin nampandre sady nampiomana azy fa � leo izahay ka miomana fa hodoranay ny Jirama �.
Maud Vuyelwa Dlomo Sarotra ny Fampihavanam-pirenena
Teboka nisongadina teo amin�ny fiaraha-miasan�i Afrika Atsimo sy Madagasikara hatramin�ny taona 2016 ny fankalazana ny fifandraisana ara-tantara sy ny fanomezana fanampiana,
HOAVIN�NY FIZAHANTANY Miankina amin�ny fiarovana an-dranomasina
Somary maka aina kely ny sehatry ny fizahantany Malagasy ankehitriny. Indrisy mantsy fa tsy toy ny taloha intsony ny fankafizan�ireo mpizahatany vahiny ny ranomasimbe Indiana.
HERINANDRON�NY KOLONTSAINA KAMERONEY Nahasarika ny maro ny resaka sakafo
Lanonana goavambe no nentina namaranana ny herinandron�ny kolontsaina kameroney andiany faha-17 notanterahina teny amin�ny Pic Vert Ambatobe, andro vitsy lasa izay.
SYNDICAT GENERAL MARITIME DE MADAGASCAR Nampidirina am-ponja vonjimaika ny SG lefitra
Raha teo am-piandrasana fatratra ny vokatr�ilay fitoriana nataony mikasika ilay fanodinkodinam-bola nisy teo anivon�ny Sygmma ( Syndicat general Maritime de Madagascar) ireo birao mpikambana ao anatin�izany nanomboka ny volana desambra lasa teo dia zavatra hafa mihitsy no nitranga.
Raharimala Andriampenotiana Fanjakan�Andriamanitra no hamerina amin�ny laoniny ny orana
Ny G.E.T.M na ny � Groupement pour l�Edification de la Th�ocratie � Madagasikara � dia mbola mamerina eto indray ireo fanambarana izay nataony an-gazety sy tamin�ny alalan�ny televiziona sy Radio fa tsy mety amintsika Malagasy
Kardinaly Pietro Parollin Noraisina toy ny filoham-panjakana
Nigadona teto Madagasikara ny alin�ny alakamisy 26 janoary lasa teo ny sekreteram-panjakan�i Vatican, Kardinaly Pietro Parollin,
Hifamelona sa hifamono ?
Samy mamely izay voany ! Izany no azo hamintinana ny fiarahamonina eto amintsika amin�izao fotoana izao.